online မင်းသား: June 2012
ဒီနေ.မှပဲတင်ဖြစ်တော့တယ်..အရင်ဆုံး သူ.ဆိုဒ်ကိုသွားဖို. ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး သွားလိုက်နော်...
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုတော့ အောက်မှာပုံလေးပြထားပါတယ် ပုံလေးအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်....
ဒါလေးက အပျော်လေးပါ ...မူလရုပ်ကချောရင်တော့ သရဲချောချောလေးထွက်လာမှာပါ...
ထက်ထက် သူငယ်ချင်းတို့ကတော့ ချောပြီးသားတွေမလား ...သရဲပုံလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ချောချောလေးတွေ ထွက်လာမှာပါ...ဟုတ်တယ်ဟုတ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 19:42 No comments:
Password အခိုးခံရရင် ပြန်ယူနည်း
သူငယ်ချင်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ..Gtalk မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မေးထားလို. ပို.စ်အဖြစ်တင်ပေးလိုက်တာပါ... အရေးကြီးဆုံးက မိမိအကောင့်ရဲ့ security question & recovery email ကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်... သိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလုပ်ပါ...
1။ ဂျီတော့ ဘောက်ခ်ထဲမှာရှိတဲ့ Forgot your password? ကိုနှိပ်လ်ိုက်ပါ..
2။ username & email လိပ်စာကိုဖြည့်ပြီး submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
3။ ပေးထားတဲ့ စာလုံးစောင်းလေးတွေကို မှန်အောင်ဖြည့်ပြီး continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
4။ Answer my security question ရှေ့က အ၀ိုင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ...
5။ အကောင့်ဖွင့်စဉ်က မိမိဖြေထားသော အဖြေကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ...
6။ ပေးထားတဲ့ ကွက်လပ်2ခု ထဲမှာ password အသစ်ကို တူအောင်ဖြည့်ပြီး Reset Password ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
ဒါဆိုရင်သူငယ်ချင်းရဲ့ Gtalk&Gmail အကောင့်ကို အခု password အသစ်ဖြင့် ၀င်ရောက်အသုံးပြုလို.ရပါပြီ..
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 22:14 No comments:
ဒီတစ်ခါ သူငယ်ချင်းတို. ပျော်ကြမယ်လို.ထင်ပါတယ်..ဘာလို.လဲဆိုတော့ online မင်းသားစုဆည်းထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ရဲ.အကောင့်တွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှလိုက်တာပါ...ဟိုတစ်ခါ gtalk မှာ လှမ်းမေးထားတဲ့ အစ်ကို လင်းလင်းအတွက် Rဇာနည်နဲ.မျိုးကြီးအကောင့်ကို ဒီပို.စ်နဲ.ပဲဖြေကြားလိုက်ပါတယ်..ဒီအထဲမှာ online သိပ်ကြိုက်တဲ့ မေသက်ခိုင်ရဲ.အကောင့်ကို ထည့်မပေးထားပါဘူး..online ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံတာပါ..online အရမ်း crazy ဖြစ်တဲ့ မေသက်ခိုင်ရဲ.အကောင့်ကို ပြန်လည်မမျှဝေနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်..(ဟိ..နာ့စာသား မိုက်တယ်နော်..)...နောက်လဲ အကောင့်လေးတွေရလာခဲ့ရင် ဒီနေရာမှာပဲ ပြန်လည်ဝေမျှပေးသွားမှာပါ..အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ...
Bambino က သီရီ babytr@gmail.com
Bambino ကအိနွေ Einway@gmail.com
ဂျောက်ဂျက် joukjack.mha@gmail.com / myanmarteens@gmail.com
ကျော်ထွဋ်ဆွေ kyawhtutswe@gmail.com /awjawlan@gmail.com
၀ိုင်းဆုခိုင်သိန်း shinthentlwin @gmail .com
G tone gtone2007@gmail.com
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 21:063comments:
ဟိ...နည်းနည်းတော့ရိုင်းမယ်ထင်တယ်...ဒါပေမဲ့ online တို.ခုခေတ် တိုးတက်မူ.အရဆိုရင်တော့ မရိုင်းလောက်ပါဘူး...ဖိုက်စတားအဖွဲ.ကဆိုထားတာပါ..တော်တော်ရယ်ရပါတယ်...သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရယ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ. တင်ပေးလိုက်တာပါ...သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေအတွက် onlineရိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်
online တောင်းပန်ပါရစေ..ဘာဆန္ဒမှမရှိပါဘူး..ရယ်စေချင်တာ တစ်ခုတည်းပါ...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 22:39 No comments:
DVD/ VCD အခွေ ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် ဒီဆော့ဝဲလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ..အထူးသဖြင့် online မင်းသားဘလော့ခ်လေးကိုအမြဲလာအားပေးနေတဲ့ အာဒမ် (အမေ့အိမ်-စတိုး-မလေးရှား)အတွက်ပါ..သူက အခွေတွေထုတ်ချင်နေတယ်လေ..ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းအာဒမ် အဆင်ပြေမယ်လို.ထင်ပါတယ်..
VCD အခွေထဲကနေ တစ်ပုဒ်ချင်း Selection လုပ် သီးသန့် လက်ရွေးစင်အခွေလေး ကို နိုင်ငံခြားကားတွေမှာလိုပဲ Menu လေးနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တာ အရင်ရွေးဖွင့်လို့ရအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်.. ကျွမ်းကျင်သလို ထပ်ပြီးဖန်တီးလို့ ရပါသေးတယ်...သူငယ်ချင်းရဲ.ကျွမ်းကျင်မူ.အပေါ်မူတည်ပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 22:03 1 comment:
ဒါလေးကတော့ ကိုယ့်အသံတွေနဲ. mp3 တွေကို ringtone လုပ်လို.ရတဲ့ဆော့လ်ဝဲလေးပါ...
လွယ်လို.online မရှင်းပြတော့ဘူးနော်...သူ.ဆိုဒ်လေးမှာသွားပြီး ဒေါင်းလိုက်နော်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 21:03 No comments:
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 04:014comments:
ကန္ဒာရနှင်းဆီ - စီးရီး
01 D Phyo - Track 1.mp3
02 D Phyo - Track 2.mp3
03 D Phyo - Track 3.mp3
04 D Phyo - Track 4.mp3
05 D Phyo - Track 5.mp3
06 D Phyo - Track 6.mp3
07 D Phyo - Track 7.mp3
08 D Phyo - Track 8.mp3
09 D Phyo - Track 9.mp3
10 D Phyo - Track 10..>
11 D Phyo - Track 11..>
12 D Phyo - Track 12..>
13 D Phyo - Track 13..>
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 03:403comments:
ယောက်ျားလေးတွေ ရဲ့ ခံစားမှု ကို နားလည်စေလိုတဲ့သဘောနဲ့ ဒီ ပိုစ် လေးကိုတင်လိုက်ရတာပါ။
1. မချစ်ပဲနဲ့ ချစ်တယ်လို့ မလိမ်ညာပါနဲ့ … မချစ်၇င်မချစ်ဘူးအစကထဲကပြတ်သားပေးပါ...
2. ၇ည်းစားဟောင်း ရှိခဲ့ဖူးတာ ချစ်သူရှိခဲ့ဖူးတာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ...ဒါပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး
အမှန်အတိုင်းချစ်သူယောက်ျားလေးကို ပြောပြပေးပါ...အချိန်ကြာပြီးမှလိမ်ညာတယ်ဆိုတာ သိ၇တဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ သူမှာပိုပြီးနာကျင်စေပါတယ်...
3. ချစ်သူယောက်ျားလေးေ၇ှ့ မှာ အရင်၇ည်းစားဟောင်းအကြောင်းကို ခဏခဏပြောဖို့မသင့်တော်ပါဘူး...
4. မိန်းကလေးအများစုပြောတတ်ကြပါတယ် …သူတို့ ဘ၀တစ်ခုလုံးပေးအပ်လိုက်ရတာပါ တဲ့...ယောက်ျားလေးတွေကရော …. နှလုံးသားတစ်ခုလုံး ပေးဆပ်ပြီးမချစ်ခဲ့ရလို့လား ?
5.ယောက်ျားလေးတွေဟာချစ်သူ နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ နေ့၇က်တွေထက် အဲဒီနေ့၇က်တွေမှာ ဘာလုပ်ခဲ့တယ်
ဆိုတာကို သတိပိုရတတ်တယ် မိန်းကလေးတွေနဲ့ကွာနေတဲ့အချက်ကတော့နေ့စွဲတွေကိုမှတ်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး … နေ့ စွဲတွေက
အလွတ်ကျက်ထားလို့၇ပေမယ့် အမှတ်တ၇လေးတွေကို အလွတ်ကျက်ထားဖို.ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး...
6. ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြ၇င် သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အေ၇ာတ၀င်မနေပါနဲ့ … အထူးသဖြင့်
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေး၇ဲ့ေ၇ှ့ မှာပေါ့...
7. ချစ်သူယောက်ျားလေးနဲ့ချိန်းတွေ့ တဲ့အခါ မထင်မှတ်တဲ့ ကြင်နာမှုလေးတွေကို ပေးပါ...နှစ်များစွာတိုင်အောင် သူသတိရနေမှာပါ...
(ဥပမာ - ကိုယ်တိုင် ချက်ယူလာတဲ့ဟင်းနဲ့ ထမင်းချိုင့်လေးကို သူ့ ကိုကျွေးတာမျိုးပေါ့ )
8. ယုံကြည်မှုပေးပါ... ယောက်ျားလေးတိုင်းဟာ အခွင့်အေ၇းသမားတွေမဟုတ်ပါဘူး ...လွတ်လပ်စွာ
နေချင်ရုံသက်သက်ကို ဆိတ်ကွယ်၇ာလို့ မထင်မှတ်ပါနဲ့...
9. တခါတလေ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ဆန်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးလေးတွေရှိကြတယ် …(ဥပမာ - တီရှပ် အင်္ကျီ အတူလေးတွေဝယ်ပြီး လျောက်လည်ချင်တာလို ဟာမျိုးပေါ့ …သဘောမတူရင်နေပါ ကြောင်လွန်းပါတယ်
လို့တော့ မတုံ့ ပြန်မိစေနဲ့ပေါ့)
10.ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေ ဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်… ဒါပေမယ့်
ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ ရဲ့ပတ်သက်မှုကကွာခြားလွန်းပါတယ်…မောင်၊နှမလို သဘောထားမျိုးပါ …။
11. ယောက်ျားလေးတွေကချစ်သူ မိန်းကလေး ကိုလှစေချင်ကြတယ် …. လှလို့ ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့်
12. တခါတ၇ံ မဖြစ်စေချင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ချုပ်ချယ်တယ်လို့မိန်းကလေးတွေကထင်တတ်ကြတယ်… အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ချစ်သူကို မဖြစ်သင့်တာတွေကိုမဖြစ်ရလေအောင် သတိပေးခြင်းမျိုးပါ..။
13. ရှိတတ်ပါသေးတယ် … မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ့ မှာ ကိုယ့်ချစ်သူလို့ ပြောဖို့ ၊
မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ရှက်တတ်ပေမယ့် … ကောင်လေးသူငယ်ချင်းတွေ ရှေ့ မှာကျတော့ကိုယ့်ချစ်သူ လို့ အသိပေးစေချင်ကြတယ် …Action to action ပါ ပဲဗျာ … မိန်းကလေးကသာ သူ့ မိတ်ဆွေတွေ အလယ်မှာ ချစ်သူလို့ အသိပေးပါစေ…ယောက်ျားလေးများက သူ့ အလိုလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ.တိုင်းချစ်သူလို့မိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် …။
14. ဘ၀မှာ ၇င်ဆိုင်ဖို့ အားအင်တွေ နဲ့အခြေတည်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ တခါတရံ
လစ်ဟာမှုလေးတွေ ရှိခဲ့၇င် နားလည်ပေးပါ … ဂရုမစိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး...
15. ဂိမ်း ၊ ဘောလုံးပွဲ မက်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရှိတယ်… စိတ်အတွက်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအနေနဲ့
ကစားနေတာပါ… တစ်သက်လုံး အဖော်ပြု ပေးနေမှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး နဲ့ဘောလုံးကွင်း တစ်ခုမဟုတ်တာ ယောက်ျားလေးတိုင်း သိထားကြပါတယ် ။
16. ချစ်သူနှစ်ယောက် ဘ၀တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ ဆိုတာ ယောက်ျားလေး၇ဲ့ တာဝန်ပါ …
ဒါပေမယ့် သူ့ မိသားစု အခြေအနေကို ငဲ့ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ် …။
18. ဥပုသ်စောင့်တဲ့ ကျား မရှိဘူး တဲ့ … မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဦးနှောက် ၊ အသိပညာတွေ နဲ့ 
ထိန်းချုပ်နိုင်မှုစွမ်း၇ည်တွေက အလကား ထားတာမဟုတ်ပါဘူး … လူ့ တန်ဖိုးရဲ့အဆုံးအဖြတ်တွေပါ ။
19. ယောက်ျားလေးတွေ၇ဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့် တစ်ခုခု( ဆေးလိပ် ၊အ၇က် ၊ကွမ်း)စတာတွေကို
မကြိုက်၇င် ချစ်သူမိန်းကလေး ကပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ် … ချစ်သူမိန်းကလေး၇ဲ့ ပါးနပ်စွာပြောဆိုနိုင်မှုနဲ.
20. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ မာန်မာန ပါပဲ …လူတိုင်းရှိတတ်ကြတာပါယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ.မာန်မာနကို အတတ်နိုင်ဆုံး မစော်ကားမိပါစေနဲ့ ။ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာမိမိချစ်သူမိန်းကလေးအတွက် မာန်မာနတွေကို လျော်ထားတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ.မာနကမာနကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေထက်အဆပေါင်းများစွာ ပိုပါတယ်…။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်မိကြပြီဆိုရင်တော့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုလေးတွေ ရှိဖို့တော့လိုတာပေ့ါ..လောကမှာအဆိုးနဲ့ အကောင်း ဒွန်တွဲနေပါတယ်… လူဆိုးရှိသလိုလူကောင်းလည်းရှိမှာပါ
...မည်သူကိုမှထိခိုက်စေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ ချစ်သူယောက်ျားလေးအပေါ်ကိုမိန်းကလေးတွေနားလည်ပေးနိုင်ရင် ကျေနပ်ပါတယ်။
(online ရဲ.ညီလေး ဝေစိုးဟန် ရဲ.မေးလ်ပို.ပေးထားတဲ့ ပို.စ်လေးပါ..ဂွတ်တယ်နော်)
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 21:56 No comments:
ကွန်ပြူတာမှာလည်း အဖို အမ ရှိတယ်ဆိုယုံမလား သူငယ်ချင်းတို. ...
1. အရင်ဆုံး Notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ.
2. ပြီး CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak "I love YOU" ဆိုတဲ့စာတန်းလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
3. Save as ကိုကလစ်ပြီး Desktop မှာ ထားပေးလိုက်ပါ..
4. File အမည်ကိုကြိုက်ရာ ပေးလိုက်ပြီး နောက်မှာ ( .vbs )လို့ခံပေးရပါမယ်...
ဥပမာ 1234.vbs လို့အမည်ပေးပြီးsave လိုက်ပါ ...Desktop မှာခုဏ save ထားတဲ့ File ကို Double click တဲ့အချိန်မှာ..I love you လို့သင့်ကိုပြောလာလိုက်မယ် ...
ပြောလိုက်တဲ့အသံကိုနားထောင်ချင်းဖြင့် သင့်ကွန်ပြူတာက ကျား လား မ လားဆိုသိရပါပြီ...
ဒါတင်မကပါဘူး အဲဒီ file ကို right click / edit / မူလစာသားတွေကိုတမျိုးပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်..ကိုယ်ရေးတဲ့ အတိုင်းကွန်ပျူတာကပြန်ပြီးစကားပြောပါလိမ့်မယ်..
ဥပမာ CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak "hi online actor i miss u" ပေါ့..ဟိ...
မူလ "I love YOU" နေရာမှာ "hi online actor i miss u" လို.ပြောင်းကြည့်တာပါ...
(မှတ်ချက်-မိမိပြောစေချင်တဲ့စာသားတွေမှာ (. / ; ' -)စတဲ့ အက္ခရာလေးတွေ မခံကြပါနဲ. ..အဲဒီအက္ခရာလေးတွေခံခဲ့ရင် သူကလဲ အဲဒီအသံထွက်အတိုင်းလိုက်ပြောနေတော့ သူငယ်ချင်းတို. နားရှုတ်မှာစိုးလို.ပါ...အသံတွေခြားချင်ရင်တော့ space bar ကိုသုံးလို.ရပါတယ်...)
မိမိနှစ်သက်ရာဝါကျ ရိုက်ထည့်ပေးသလို အဲဒီတိုင်းစကားပြောလိုက်မယ်နော် မြန်မာလို
တော့မရပါဘူး...သူငယ်ချင်းတို့ ပြောစေချင်တဲ့စကားတွေကို ရိုက်ထည့်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ..
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ သူငယ်ချင်းတို. ....
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 20:42 1 comment:
အချို့မှာလူသိများသကဲ့သို့ အချို့ မှာလူသိနည်းသည်များလည်းရှိသည်။အချို့ မှာ မိမိ
အချို့ ဘလော့များမှာဆို အင်တာနက်နယ်ပယ်တွင် တရားဝင်အွန်လိုင်းရေဒီယို ၉ ခုရှိသည့်အနက်မှ မိမိတို့နှစ်သက်သည့်တခုကိုထည့်သွင်းအသုံပြုတတ်ကြသည်...အချိူ့မှာမူမိမိကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းရေဒီယိုစတေရှင် ထောင်ဖို့ ငွေကြေးနှင့်နည်းပညာအခက်ခဲများရှိကြသည်။ထို့ ကြောင့် စိတ်ဆန္ဒရှိသော်လည်း ကိုယ်တိုင် မစွမ်းသဖြင့် တပါးသူအားအကူညီတောင်းသော်လည်း အခက်ခဲများရှိနေသဖြင့်စ်ိတ်ညစ်နေသူများလည်းအများအပြားရှိကြပါတယ်။ထို့သူများအတွက် အခမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုစတေရှင်ထောင်နိင်မည့် Radio Streaming website များကိုဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ အကယ်လို့ အခမဲ့ ကိုသဘောမကျရင်လည်း အခကြေးငွေနဲနဲလေးလစဉ်ပေးရုံဖြင့် အွန်လိုင်းရေဒီယိုထောင့်နိုင်မည့်ဆိုက်ဒ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပေးသွားမည်။မိမိသည် Free account ပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါ Window Media Player သို့မဟုတ် Winamp များတွင် Port and Password ထည့်ပြီး အလွယ်တကူ သီချင်းများလွှင့်နိုင်ပါသည်။မိမိတို့ ဘလော့အတွင့် Html Code များထည့်သွင့်ပြီး Radio Play Icon လေးထားပြီး သူငယ်ချင်းနှင့်စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအပျင်းပြေနားဆင်နိုင်ရင် အတွက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Softwares တော်တော်များများကိုအခမဲ့ ရှာဖွေဒေါင်းနိုင်မည့်ဆိုက်ကတော့ ..ဒေါင်းရန်ဤနေရာမှာနှိပ်ပါ
Window Media Playerဒေါင်း၇န်ဤနေရာမှနှိပ်ပါ
မိမိအသုံးပြုနေသော Mozilla Firefox နှင့် Google Chrome တွင် သီချင်းသံများ အသံနှင့်ပတ်သက်သည်များမကြားရပါက"ဒီမှာဒေါင်းရန်"
ကဲ ရေဒီယိုStreaming Sever Web site တွေ ဆက်ပေးမယ်နော်..အောက်မှာဒေါင်းပါ။
အခမဲ့အွန်လိုင်းရေဒီိယိုပြုလုပ်ရန် ဒီမှာ Free Account Website-1 & ဒီမှာ Web site -2 ဖွင့်ပါ။ထို့နောက် Window Media Player or Winamp မှာ ထိုအကောင့် Control Pannel ထဲမှ Port and Password ဆိုတာကို ရှာပီးထည့်သုံးပါ။ အခကြေးငွေဖြင့်သုံးချင်ပါကလည်းလည် လစဉ်ဈေးနှုန်းနှင့်နားဆင်သူအရေအတွက်အလိုက် ဈေးနှုန်းများကိုအထက်ပါလင့်ခ်များတွင် နှိပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါသည်။အခြားအခြားသော Free Radio Streaming Websites များလည်းရှိပါသေးတယ်..မိတ်ဆွေများအတွက်လူသုံးအများဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံး ဆိုက်ဒ် ၂ ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နည်းပညာများ အခက်ခဲရှိနေသူများလည်းအလွယ်တကူသဘောပေါက်စေရန် အလွယ်ကူဆုံးဖော်ပြပေးထားပါသည်။အခက်ခဲများမရှိပဲ အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.....
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 20:35 No comments:
ဓာတ်ပုံတွေကို slideshow လုပ်မယ်
ဒီတစ်ခါ online ပေးမဲ့ဆော့လ်ဝဲလေးကတော့အရမ်းမိုက်တယ်...ဓာတ်ပုံတွေကို slideshow လုပ်တဲ့
ဆော့လ်ဝဲလေးပါ...လုပ်ပြီးရင် DVD နဲ.ထုတ်လို.ရသလို..စတစ် ထဲမှာလဲ သိမ်းလို.၇ပါတယ်...online ကိုမေးလ့်ပို.ပြီး တောင်းထားတဲ့ မမီမီ(မိထ္တီလာ) အတွက် ဒီပို.စ်လေးနဲ.ပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါရစေ...သူငယ်ချင်း
များအားလုံးလဲ ကြိုက်ကြမယ်လို.မျှော်လင့်မိပါတယ်...အောက်မှာပုံနဲ.တကွ online ရှင်းပြထားပါတယ်...
သူ.ကိုတော့ ဒီနေရာလေးမှာဒေါင်းလိုက်ပါ ...
ဒီဆော့လ်ဝဲလေးက သူငယ်ချင်းတို.ထပ်ပြီးစမ်းကြည့်လို.ရတာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်..online ရေးတာကမပြည့်စုံသေးပါဘူး...ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကြပါနော်...ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 23:43 No comments:
ဒီတစ်ခါ online မျှဝေပေးမဲ့ နည်းပညာလေးကတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆော့လ်ဝဲလေးပါပဲ..တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်...online အထင်တော့ download maneger ထက်တောင်သာမယ်ထင်ပါတယ်...မြန်လည်းမြန်ပါတယ်...သူငယ်ချင်းတို.လဲကြိုက်လိမ့်မယ်လို.ထင်ပါတယ်..
သူ.ကိုလိုချင်ရင် ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်..ပြီးရင်..သူကဒီလိုမေးပါလိမ့်မယ်...သူငယ်ချင်းက ဒီဆော့လ်ဝဲလေးကို မော်ဇီလာမှာ သုံးမှာလား....အင်တာနက်အိပ်ပလော်ရာ မှာသုံးမှာလားပေါ့..
ဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ့...သူ.ကဒေါင်းလိုက်ပြီး စက်ထဲမှာ အင်စရော လုပ်လိုက်ပါ...ဒါဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့...
ဒါဆိုရင် သူငယ်ချင်းဘာကိုဒေါင်းချင်လဲ သူက ဒီနေရာလေးမှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်...အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို. မျှော်လင့်မိပါတယ်...ဒီဆော့လ်ဝဲလေးကို အကြံပေးခဲ့တဲ့ ကိုအာဒမ် (အမေ့အိမ် စတိုး-မလေးရှား) ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 22:06 No comments:
ပုံလေးတွေကို ဘောင်လှလှလေးတွေထဲကို ထည့်မယ်
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ... ဒီတစ်ခါလည်း ပုံလေးတွေကို ဘောင်လှလှလေးထဲမှာ ထည့်ရအောင်နော် ..ထက်ထက် သူရဲ့ Code လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် ...Code မထည့်ဘဲနဲ့လည်း တခါတည်း လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် ...
လုပ်ပုံနည်းကတော့ ဒေါင်းလုပ် ကို Run ပြီးဖွင့်ပြီးတာနဲ့ အောက်က ပုံလေးအတိုင်းဖြစ်သွားမယ်နော် ...ကုဒ်တောင်းပေမယ့် တခါတည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးမှ ပြောတာပါ
ကုဒ်မထည့်ဘဲနဲ့တခါတည်းလုပ်ကြည့်တာ ဒီလိုပုံလေးထွက်လာပါတယ် ..လွယ်လည်းလွယ်ပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 23:22 No comments:
Desktop နာရီ The Areo Clock
ထက်ထက်က မေးလ်ပို.ပေးထားတာပါ.. ဒါလေးကတော့ နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ Desktop နာရီလေးပါ...
အပေါ်နာရီလေးပါ အပေါ်ကနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ ....သူ့ရဲ့ အရွယ်အစားကိုတော့
ကိုယ်ကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်.... ကိုယ်ထားချင်းတဲ့ Screen ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို
လိုသလိုရွှေ့သုံးလို့ရပါတယ် .....သုံးရလွယ်တဲ့ Portable လေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ....နာရီရဲ့
အရောင်ကိုလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရောင် ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ် ....အောက်မှာ ဒေါင်း
ယူထားလိုက်ပါ ....လိုအပ်တော့လည်း သုံးရတာပေါ့ ...နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
ဒီမှာဒေါင်းပါ - http://download.cnet.com/TheAeroClock/3000-2350_4-75451825.html
ဒီင်္မှာဒေါင်းပါ - http://downloads.phpnuke.org/en/download-item-view-y-y-n-g-v-n/THE%2BAERO%2BCLOCK.htm
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 23:06 No comments: